किन हुन्छ बालबालिकामा अनिद्राको समस्या ? | सुदुरपश्चिम खबर
किन हुन्छ बालबालिकामा अनिद्राको समस्या ?
जुन बालबच्चामा अनिद्राको समस्या छ उनीहरु राती निदाउन सक्दैनन् भने दिउसो बढी नै समय सुत्छन् । कहिले काहीँ त बालबच्चा थाकेर पनि दिनमा सुत्न सक्छन् । यद्यपि सामान्य अवस्थामा पनि उनीहरु दिनमा सुत्छन् भने उनीहरुमा अनिद्राको समस्या छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । दिनमा पटक पटक सुत्नु पनि ठिक होइन ।
ठूला मान्छेमा जस्तै बालबच्चाले पनि डरलाग्दो सपना देख्ने गर्छन् । बेलाबखत उनीहरु खराब सपना देखेर निद्रामै तर्सिएर उठ्ने गर्छन् । त्यसपछि उनीहरुलाई सुत्न अरु असहज हुन्छ । दिनमा पनि सपना सम्झिएर उनीहरु डराउने गर्छन् ।
पटक पटक डरलाग्दो सपना देख्नु पनि निद्रा सम्बन्धी विकार हो । यसले बच्चाको निद्रा विथोलिन्छ, मानसिक तनाव बढ्छ र स्वास्थ्यमा पनि समस्या ल्याउँछ ।
यदि तपाईंको बच्चा आधी रातमा उठेर निद्रामै उताउता हिँड्छन् भने यो पनि एक विकार नै हो । कहिले काहीँ यस्तो समस्या देखिए त सामान्य मान्न सकिएला यद्यपि बारम्बार उनीहरु निद्रामा हिँड्ने गर्छन् भने चिकित्सकको परामर्श आवश्यक छ । अनलाइनखबर बाट सभार